Goolhaya Liverpool waa GEESIGA Goolhayayaasha…(Bal Arag Qiimeyntan) – Gool FM
Goolhaya Liverpool waa GEESIGA Goolhayayaasha…(Bal Arag Qiimeyntan)
(England) 12 Dis 2018. Goolhayaha Liverpool Alisson ayaa xalay sameeyay bad baado waali ah ciyaartii ay Liverpool sida dirqiga ah ugu soo gudubtay wareega 16-ka Champions League kaddib markii ay gool madi ah ku martay Napoli.
Goolyahaya reer Brazil ma ahan oo kaliya inuu ahaa geesiga reds ee kulankii xalay balse sidoo kale isagaa ka kaabo ah Premier League.
Tirokoob ay sameysay Opta oo ku aadan goolhayayaasha horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan ciyaaaray toban kulan iyo ka badan ayaa waxaa kaalinta koowaad ku soo baxay Allison.
Wuxuu noqday goolhayaha laga dhaliyay tirada ugu yar, wuxuu noqday kan sameeyay bad baadada ugu badan sidoo kale waa goolyahay kulamada ugu badan shabaqiisa ilaashaday.
Waxaa lagu qiyaasay bad-baadada uu sameeyay horyaalka ilaa iminka 85.7, waxaa ku soo xiga goolhayaha Tottenham, saddexaad waxaa soo xirta midka Manchester City halka uu Afaraad ku jiro goolhayaha Chelsea.
Safafka rasmiga ah ee Valencia vs Manchester United (Pogba oo ku soo bilowday)
Safafka rasmiga ah ee Manchester City vs Hoffenheim